कोरोना संक्रमणका बेला ८५ जना गर्भवतीको मृ'त्यु - सबैको समाचार
काठमाडौं, २२ भदाै । लकडाउन सुरु भएयता पाँच महिनामा ८५ जना गर्भवती तथा सुत्केरीले ज्या’न गु’माएका छन्। सरकारले प्रजनन स्वास्थ्यलाई सुरक्षित मातृत्व र महिला अधिकारका रूपमा लिए पनि उपचार अभावमा उनीहरूले मृत्युवरण गर्नुपरेको हो। यीमध्ये झन्डै १८ प्रतिशतले अस्पतालै टेक्न पाएनन्।
‘गर्भावस्थाको जटिलता र र’क्त’स्रा’व नै मुख्य कारण हुन्’, प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. पुण्या पौडेलले भनिन्, ‘त्यसबाहेक संक्रमणको कारणले पनि ज्या’न गुमाउँछन्। अन्य शारीरिक समस्या वा दु’र्घ’टनाका कारण पनि ज्या’न गु’मा’एको पाइएको छ।’
स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार ८५ मध्ये ७३ जनाको मात्र मृ’त्युको कारण खुलेको छ। महाशाखाका निर्देशक डा. भीमसिंह तिंकरीले १२ जनाको कारण नखुलेको जानकारी दिए। ‘टाढाबाट अस्पताल पुग्न समस्या भयो। दुर्गम हिमाली र पहाडी जिल्लाबाट समयमै अस्पताल पुग्न नसक्दा ज्यान गएको पाइन्छ’, निर्देशक डा. तिंकरीले भने।
महाशाखाको तथ्यांकअनुसार घरमै ७, अस्पताल लैजाँदै गर्दा ११, अस्पतालमा झन्डै ४५ प्रतिशतको मृ’त्यु भएको पाइएको छ। आकस्मिक र अत्यावश्यकीय सेवाका लागि यातायात र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नहुँदा अधिकांशको ज्यान गएको सरकारी अधिकारी बताउँछन्।
लकडाउनको तीन महिनामा ४३ जनाको मृ’त्यु भएको थियो। लकडाउन हटेपछि निषेधाज्ञाका कारण गर्भ जाँच गराउनै महिलालाई समस्या भइरहेको छ। चेतना अभावमा गर्भावस्थाको जटिलताका कारण पनि कतिपयको ज्या’न जाने गरेको छ। नवजात शिशु एवं मातृ शाखा प्रमुखसमेत रहेकी डा. पौडेलले १२ घटनाको कारण खोजी भइरहेको जनाइन्। उनका अनुसार गर्भवतीलाई परिवारका सदस्यले समयमै अस्पताल नपुर्‍याउने र स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा पनि अकालमा ज्यान गएको छ।
डा. तिंकरीले गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि हवाई उद्धार कार्यक्रमअन्तर्गत दुर्गम क्षेत्रका कतिपय महिलाको उद्धार गरिएको जानकारी दिए। समीक्षा अवधिमा ४१ जनाभन्दा बढीको उद्धार गरिएको छ। उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच समन्वय र सहकार्यको खाँचो रहेको उनको भनाइ छ। दिनेश गाैतमले अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
ग्लोबल आइएमई बैंकको १० औ वार्षिकोत्सव सम्पन्न
आज श्रीपञ्चमी,सरस्वतीको पूजा आराधना गरी देशभर मनाइँदै